Dhuguma bishaan qorraan qaama dhiqachuun faayidaa qabaa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Bishaan qorraan qaama dhiqachuun fayyaa namaaf gaariidha yaadni jedhu namoota hedduu amansiisaa jira
Namoonni baayyeen bishaan qorraan guyyaa hunda qaama dhiqachuun faayidaalee tamsa'ina dhiigaa fooyyessuu, miira dhiphinaa furuu fi dammaqina dabaluu akka qabu ni dubbatu.
Dhibbeewwan akka gom'uu fi cinqama sammuus ni yaala, maashalee dadhaban ni cimsa, cooma qaamaa ni gubuu akkasumas dandeettii sirna dhiibee dandamachuurrattis gahee qaba jedham.
Qorannooleen Saayinsii kan mirkaneessan jiruu laata? yoo jiraatan hoo yaada namootaa gama kanaan jiru jijjiirsisuuf hangam amansiisaadha?
Hunda dura wanti beekamu, bishaan qorraan wiyat qaama keenyarra bu'u qaama namaa naasisa. Qaamni atattamaan dudduubee kenna. kunimmoo, dhahannaa onnee fi tamsa'ina dhiigaa ni dabala hormoonii adreenaaliin jedhamus burqisiisa.
Bishaan qorraan qaama dhiqachuun nama rom'isiisuun alatti fayyaa namaarratti dhiibbaa badaan geessisu hin jiru.
''Yoo hedduu qorrattaniifi rakkoo onnee qabaattan of wallaaluu maltan kanaa alatti garuu na amanaa rakkoo takka hin qabu'' jedhu dhiiyeessaa Sagantaalee BBC kan ta'an Dr. Kriis Vaan Tuuleken.
Dhibee gaddaa fi cinqama sammuu
Rakkoo fayyaa kana bishaan qorraan dhiqachuun yaaluun kana dura kan hin qoratamne ta'us ogeeyyiin tokko tokko garuu waldhaansa gaariidha jedhu.
yaadni bu'uuraa waldhaansa kana duuba jiruu, wayita namoonni dhiibee gom'uu fi cinqaa sammuu qaban bishaan qorraan qaama dhiqatan, qaamni saanii hedduu dammaquun wanta isaan cinquuf deebii akka kennan gargaara.
Goodayyaa suuraa Itti fufinsaan bishaan qorraan qaama dhiqachuun cinqaa sammuu hir'isuuf garagaara amantaan jedhu jira.
Bishaan qorraan qaama guutuu dhiqachuun kun yeroo irra deddeebi'amu cinqaa sammuu xiqqeessaa xiqqeessaa deema yaada jedhu qabu ogeeyyiin.
Bara 2013tti waltajjii TED talk jedhamu irratti yaada isaanii kan dhiyeessan Triyaatleete Jo'eel Ruyoon muuxannoo dhuunfaasaanirraa bishaan qorraan qaama dhiqachuun sodaa fi dhimmoota yaaddessoo akka gahumsaan keessa bahan gargaara jedhaniiru.
Sirna ittisa dhibee
Akka Dr. Kriis Vaan Tuuleken jedhanitti ammaaf ragaan yaada kan dhugoomsu hin jiru.
Haata'u malee qorannoon biyya Neezarlaanditti dhimma bishaan qorraan qaaama dhiqachuurratti hojjetamee bara 2016tti maxxanfame akka mul'isutti harka 29 kan ta'an na dhukubaa jiraa jedhanii akka hin yaadne taasisa jedha.
Shaakala qaamaan booda dhukkubbi irreef
Atleetotni hedduun shaakala booda bishaan qorraan qaama dhiqachuu filatu.
Bishaan qorraan miira dhukkubbii xiqqeessun wayita shaakalaa maashaalee dadhaban jajjabeessa jedhamee amanama.
Dhimmi kun ni hojjetaafi hin hojjetuurratti raagaan saayiinsiin lafa kaahu waldhiitaadha.
Image copyright KURJANPHOTO / Getty Images
Goodayyaa suuraa Namoonni bishaan qorraan dhiqachuun miira gaarii kennuuf itti fufuu qabu jedhu Dr. Tuuleken
Qorannooleen tokko tokko bu'aa qabaachuu bishaan qorraa bira geenye wayita jedhan kaan bu'aa qorannoo faallaa kanaa dhiyeessu.
Dhumarratti Dr. Kriis Vaan Tuuleken hanga ammaatti qorannoon gama waldhaansa bishaan qorraan jiru sadarkaa daa'imuummarratti waan argamaaf, yaada waliigalaa dhimma kana irratti kennuun dhibaadha jedhu.
Hanga ammaatti dhiibbaan hin mallee inni fayyaa namaarraan gahe hanga hin jirretti bishaan qorraan qaamaa dhiqachuun itti fufuu qaba jedhan.
Akka dhuunfaatti ji'oota jahan darbaniif itti fayyadamaan jjira miirri gaariinis natti dhagaahamaa jira jedhu Dr.Tuuleken.
Duuti Mursii Masrii qaquumsaaf saaxile